Wed, May 27, 2020 at 1:59pm
बुधबार, २९ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	27.78K
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा फिल्मकी पारखी हुन् । राणाका श्रीमान पनि खुब फिल्म हेर्छन् । तर, अफेयर चल्दा भने हलमा गएर फिल्म नहेरेको राणा बताउँछिन् । बच्चैदेखि आफूले फिल्म हेर्ने गरेको राणाले बताएकी छिन् । धेरैजसो परिवारसँग र कहिलेकाहीँ साथीभाईसँग फिल्म हेर्न राणा हल पुग्ने गरेकी छिन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकसँग राणा भन्छिन्, ‘ त्यो बेला अहिलेजस्तो ब्वाइफ्रेण्ड, गर्लफ्रेण्ड भन्ने चलन थिएन । समाज पनि खुल्ला थिएन । केटाको हाल समाउन पनि डर लाग्ने समय थियो । कहाँ सँगै फिल्म हेर्न जानु र ? कहिल्यै गइएन । बरु विवाह भएपछि धेरै पटक गइयो । विवाह गरेर नेपालगञ्ज बस्दा फिल्म हेर्न लखनउ पुगिन्थ्यो । दुई दिन बस्यो । राम्रो रेष्टुरेन्टमा गयो, खायो । अलिअलि किनमेल गरेर फर्कियो । होटलका सामान पनि किनेर ल्याउँथ्यौँ ।’
उनले राम्रो मुभी लागे रातिको सो हेर्न जाने गरेको पनि बताएकी छिन् ।
नेपाली भाषामा थपिए ९० हजार नयाँ शब्द
माैका परीक्षा खुल्याे : १८ वर्षअघि पढाइ छोडेका विद्यार्थीलाई विशेष मौका
यस्ता छन् खाली पेटमा चिया पिउँदाका ५ असरहरु
यसरी बच्न सकिन्छ डिप्रेशनबाट, यस्ता छन टिप्स !
केटीहरु ब्रेकअप पछि पनि पूर्व प्रेमीको बारेमा सोच्छन् यी ८ कुराहरु !
‘बढी मोबाइल चलाउँदा खप्परमा सिङ्’
लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
तपाई आफ्नो सन्तानलाई खुसी राख्न चाहानु हुन्छ ? यी हुन् पर्भाबकारी तरिका!
अँध्यारोबाट उज्यालो संसारमा प्रवेश गर्नेहरु भन्छन् : उज्यालोको ज्योति बाडौं